ဖုန်းလာချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေရာတစ်ခုကနေ ရှောင်သွားဖို့ အကောင်းဆုံး Fake Call App ၅ ခု – MyTech Myanmar
ဖုန်းလာချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေရာတစ်ခုကနေ ရှောင်သွားဖို့ အကောင်းဆုံး Fake Call App ၅ ခု
စားသောက်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်စကားမပြောချင်တဲ့သူတွေနဲ့ စကားပြောနေရတဲ့အချိန်က စိတ်ညစ်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဖုန်းလာရင် ဖုန်းပြောရင်းနဲ့ ရှောင်သွားဖို့ စိတ်ကူးတတတ်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး Fake Call App ၅ ခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Share သွားဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။
အခု App ကတော့ အချိန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီး ဖုန်းခေါ်တာ (ဒါမှမဟုတ်) Message ပို့နိုင်တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းပြောတဲ့အသံကိုလည်း App ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အသံတွေကို ရွေးချယ်နိုင်သလို နှစ်သက်သလို Record ပြုလုပ်ပြီးလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
2. Face Call & SMS
အခု App ကတော့ ဖုန်းခေါ်ပေးတာတင်မဟုတ်ပဲ ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်ကိုပါ ကြိုတင်သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကို ၅ စက္ကန့်ကနေ ၁ နာရီအထိ သတ်မှတ်ထားနိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်အလိုရှိသလောက် ဟန်ဆောင်ဖုန်းပြောလို့ရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Message တွေကိုလည်း အချိန်သတ်မှတ်ပြီး ပို့နေအောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
ဒါကတော့ အရေးကြီးကိစ္စရှိချင်ယောင်ဆောင်တာပဲဖြစ်ြဖစ်၊ စနောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်တော်တဲ့ App တစ်ခုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အရေးပေါ် ရဲကားသံတွေကိုပါ နောက်ခံထားပြီး ဖုန်းခေါ်ပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု App ကတော့ သုံးရအလွယ်ကူဆုံး App တစ်ခုဖြစ်ပြီး Caller Name အပြင် Caller Picture ကိုပါ ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အချိန်ကိုလည်း နှစ်သက်သလိုထားရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
5. Mr. Caller Free (Fake Call & SMS)
ဒီ Application ကတော့ Fake Call ခေါ်ဆိုမယ့်အချိန်ကို ၆ နာရီအထိ ကြိုပြီး Schedule လုပ်ထားနိုင်တဲ့ Application တစ်ုခဖြစ်ပါတယ်။ Fake Call Log ပါ ပါဝင်တဲ့အတွက် ဖုန်းကိုမတော်တဆတစ်ယောက်ယောက်က ယူစစ်တယ်ဆိုရင်တောင် ဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ App တစ်ခုပါ။
MyTech Myanmar2017-12-16T16:07:16+06:30December 16th, 2017|Mobile Phones|